ချစ်သူစုံတွဲတိုင်း အွန်လိုင်းပေါ်မှာမလုပ်သင့်တဲ့ အရေးကြီးဆုံးအရာက ဘာများလဲ? – Trend.com.mm
Posted on June 28, 2018 by Noel
ဒီတစ်ခါတော့ ချစ်သူစုံတွဲတွေဖြစ်တတ်တဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေနဲ့ အကြံဥာဏ်ကောင်းလေး တစ်ချို့ ပြန်ပြီးမျှဝေပေးချင်ပါတယ်။တစ်ခါတစ်လေ ချစ်သူရည်းစားတွေအွန်လိုင်းမှာရန်ဖြစ်တယ်၊ ဒါပေမဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင် တွေ့တဲ့အခါမှာတော့ အဲ့ဒီပြဿနာဟာ ဘာမှမဟုတ်သလိုဖြစ်သွားပြီး ပြန်တည့်သွားတတ်ကြတယ်ဟုတ်! ဒီလိုဖြစ်တတ်တာကိုလည်းချစ်သူစုံတွဲတိုင်းလိုလို သတိထားမိကြမှာပါ။
ရန်ဖြစ်တော့မယ်။ချစ်သူကိုအပြစ်တင်စကားဆိုမယ်ဆိုရင်တောင် အွန်လိုင်းပေါ်ကနေ စာရိုက်ပို့တာ၊ အွန်လိုင်းပေါ်မှာရန်ဖြစ်တာကို ရှောင်သင့်တယ်လို့စိတ်ပညာပိုင်းဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်သူ Dr. Stan Tatkin က အကြံပေးထားပါတယ်။တစ်ချို့ဆိုရင် အပြင်မှာတွေ့နေတုန်းအဆင်ပြေပေမဲ့ အွန်လိုင်းမှာတွေ့တဲ့အခါ စကားနာထိုးတာမျိုး၊ရန်စကားစမိတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်ပြီး အဆင်ပြေနေတဲ့ဆက်ဆံရေးကိုပိုပြီးဆိုးဝါးအောင်လုပ်မိတတ်ကြပါတယ်။
Dr. Stan Tatkin ရဲ စကားအရ အွန်လိုင်းပေါ်မှာစကားများရန်ဖြစ်တာဟာ မျက်နှာချင်းဆိုင် မဟုတ်တဲ့အတွက် ခံစားချက်တွေကိုဖုံးကွယ်ထားသလိုမျိုးဖြစ်နေပြီး ဒီလိုဖုန်းမျက်နှာပြင်ကနေ စကားစစ်ထိုးနေတာက ကားမောင်းနေရင်းမျက်နှာလွှဲထားသလိုမျိုးပဲ မှားယွင်းတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက် တစ်ခုပါ။ပြဿနာသေးသေးလေးကအစ ဖြေရှင်းဖို့အတွက်မျက်လုံးချင်းဆက်သွယ်စကားပြော ဖို့လိုအပ်ပါတယ်တဲ့။
မျက်နှာချင်းဆိုင်ဖြေရှင်းတာက တစ်ယောက်ရဲ့ မျက်နှာအရိပ်အကဲကိုပိုသိနိုင်ပြီး စကားများနေရင်တောင် ဒီစကားက သူ့ရင်ထဲက တကယ်လာတဲ့စကားလား၊တမင်နာကျင်အောင် ပြောတဲ့စကားလားဆိုတာ အကဲခတ်လို့ရပါတယ်။ပြီးတော့ အွန်လိုင်းပေါ်မှာစကားများရန်ဖြစ်တာက အခြေအနေကိုပိုပြီးဆိုးစေပြီး မျက်နှာချင်းဆိုင်ဖြေရှင်းတာကသာ အချိန်တိုတိုနဲ့ပြဿနာ ကိုပြေလည်အောင် ဖြေရှင်းနိုင်တယ်လို့သိရပါတယ်။ရန်ဖြစ်ပြီးပြန်ချစ်ကြတယ်ဆိုပေမဲ့လည်း အွန်လိုင်းပေါ်မှာစကားများရန်ဖြစ်တာကိုတော့ အတတ်နိုင်ဆုံးရှောင်သင့်ပါတယ်။
ဒါကြောင့် ချစ်သူစုံတွဲတွေရန်ဖြစ်စကားများတဲ့အခါ အွန်လိုင်းပေါ်မှာစကားများ၊စကားနာထိုးတာက အခြေအနေကိုပိုပြီးဆိုးဝါးစေပါတယ်။ဘယ်လိုပြဿနာမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ် အပြင်မှာမျက်နှာချင်း ဆိုင်တွေ့ပြီးဖြေရှင်းကြပါလို့ အကြံပြုလိုက်ပါရစေ။အပြင်မှာဖြေရှင်းတာက စိတ်ဆိုးနေရင်တောင် ချော့လို့ရတဲ့နည်းလေးတွေအများကြီးရှိတယ်နော်😉 ခဏလေးနဲ့ပြန်ပြီးပြေလည်သွားမှာသေချာပါ့ ❤️
ဒီတဈခါတော့ ခဈြသူစုံတှဲတှဖွေဈတတျတဲ့အကွောငျးအရာလေးတှနေဲ့ အကွံဉာဏျကောငျးလေး တဈခြို့ ပွနျပွီးမြှဝပေေးခငျြပါတယျ။တဈခါတဈလေ ခဈြသူရညျးစားတှအှေနျလိုငျးမှာရနျဖွဈတယျ၊ ဒါပမေဲ့မကျြနှာခငျြးဆိုငျ တှတေဲ့အခါမှာတော့ အဲ့ဒီပွဿနာဟာ ဘာမှမဟုတျသလိုဖွဈသှားပွီး ပွနျတညျ့သှားတတျကွတယျဟုတျ! ဒီလိုဖွဈတတျတာကိုလညျးခဈြသူစုံတှဲတိုငျးလိုလို သတိထားမိကွမှာပါ။
ရနျဖွဈတော့မယျ။ခဈြသူကိုအပွဈတငျစကားဆိုမယျဆိုရငျတောငျ အှနျလိုငျးပျေါကနေ စာရိုကျပို့တာ၊ အှနျလိုငျးပျေါမှာရနျဖွဈတာကို ရှောငျသငျ့တယျလို့စိတျပညာပိုငျးဆိုငျရာ ကြှမျးကငျြသူ Dr. Stan Tatkin က အကွံပေးထားပါတယျ။တဈခြို့ဆိုရငျ အပွငျမှာတှနေ့တေုနျးအဆငျပွပေမေဲ့ အှနျလိုငျးမှာတှတေဲ့အခါ စကားနာထိုးတာမြိုး၊ရနျစကားစမိတာမြိုးတှဖွေဈတတျပွီး အဆငျပွနေတေဲ့ဆကျဆံရေးကိုပိုပွီးဆိုးဝါးအောငျလုပျမိတတျကွပါတယျ။
Dr. Stan Tatkin ရဲ စကားအရ အှနျလိုငျးပျေါမှာစကားမြားရနျဖွဈတာဟာ မကျြနှာခငျြးဆိုငျ မဟုတျတဲ့အတှကျ ခံစားခကျြတှကေိုဖုံးကှယျထားသလိုမြိုးဖွဈနပွေီး ဒီလိုဖုနျးမကျြနှာပွငျကနေ စကားစဈထိုးနတောက ကားမောငျးနရေငျးမကျြနှာလှဲထားသလိုမြိုးပဲ မှားယှငျးတဲ့ဆုံးဖွတျခကျြ တဈခုပါ။ပွဿနာသေးသေးလေးကအစ ဖွရှေငျးဖို့အတှကျမကျြလုံးခငျြးဆကျသှယျစကားပွော ဖို့လိုအပျပါတယျတဲ့။
မကျြနှာခငျြးဆိုငျဖွရှေငျးတာက တဈယောကျရဲ့ မကျြနှာအရိပျအကဲကိုပိုသိနိုငျပွီး စကားမြားနရေငျတောငျ ဒီစကားက သူ့ရငျထဲက တကယျလာတဲ့စကားလား၊တမငျနာကငျြအောငျ ပွောတဲ့စကားလားဆိုတာ အကဲခတျလို့ရပါတယျ။ပွီးတော့ အှနျလိုငျးပျေါမှာစကားမြားရနျဖွဈတာက အခွအေနကေိုပိုပွီးဆိုးစပွေီး မကျြနှာခငျြးဆိုငျဖွရှေငျးတာကသာ အခြိနျတိုတိုနဲ့ပွဿနာ ကိုပွလေညျအောငျ ဖွရှေငျးနိုငျတယျလို့သိရပါတယျ။ရနျဖွဈပွီးပွနျခဈြကွတယျဆိုပမေဲ့လညျး အှနျလိုငျးပျေါမှာစကားမြားရနျဖွဈတာကိုတော့ အတတျနိုငျဆုံးရှောငျသငျ့ပါတယျ။
ဒါကွောငျ့ ခဈြသူစုံတှဲတှရေနျဖွဈစကားမြားတဲ့အခါ အှနျလိုငျးပျေါမှာစကားမြား၊စကားနာထိုးတာက အခွအေနကေိုပိုပွီးဆိုးဝါးစပေါတယျ။ဘယျလိုပွဿနာမြိုးပဲဖွဈဖွဈ အပွငျမှာမကျြနှာခငျြး ဆိုငျတှပွေီ့းဖွရှေငျးကွပါလို့ အကွံပွုလိုကျပါရစေ။အပွငျမှာဖွရှေငျးတာက စိတျဆိုးနရေငျတောငျ ခြော့လို့ရတဲ့နညျးလေးတှအေမြားကွီးရှိတယျနျော😉 ခဏလေးနဲ့ပွနျပွီးပွလေညျသှားမှာသခြောပါ့ ❤️
ကမ်းခြေသွားကဲဖို့ အစီစဉ်ရှိတယ်ဆို ဒါလေးတွေတော့ လုပ်ကြည့်